सेन्ट पीटर्सबर्ग - आज पुरानो जिल्लाको एउटा सक्रिय नवीकरण छ जसमा एक शहर। अनुसार संघीय कार्यक्रम महानगरबारे संग अप्रचलित र पुरानो ख्रुश्चेव कुख्यात, आफ्नो अप्रचलित भवन कारखानों र अन्य औद्योगिक उद्यम को छुटकारा हुन्छ, र आफ्नो ठाउँमा आधुनिक आवासीय परिसर बनाए। मास्को क्षेत्र शहर को केन्द्र मा स्थित र पुरानो एक छ। यसको नवीकरण संग जडान बढेको ध्यान प्राप्त गरेको छ। नयाँ सुविधाहरु को निर्माण को लागि अनुमति मात्र ती कम्पनीहरु अचल सम्पत्ति बजार मा एक साँच्चै स्पष्ट प्रतिष्ठा छ कि प्राप्त गर्न सक्छ। साथै, अझै पनि आवश्यक र व्यावसायिक परियोजना प्रदान गर्न।
कम्पनीहरु "नेता समूह" सफल भयो। र अब यसलाई सेन्ट पीटर्सबर्ग को Moskovsky जिल्ला बहु-मंजिल्ला आवासीय जटिल "Sirius" गर्न उच्च भएको छ। जटिल स्थान: मास्को राजमार्ग, 13 तपाईं मेट्रो स्टेशन "स्टार" मा आवश्यक भर पाउन चाहनुहुन्छ भने। परिसर यसलाई देखि आठ मिनेट भित्र पुग्न सकिन्छ।
मात्र दुई भवन निर्माण छ रूपमा यो परियोजना, एक मात्रा भनिन्छ गर्न सकिँदैन। तिनीहरूलाई को एक 17 फर्श हुनेछ, दोस्रो - 23 यो 576 dwellings बेच्न योजना छ। निर्माण को पहिलो तल्ला व्यावसायिक अचल सम्पत्ति ल्याइनेछ। आवास सुविधा को कक्षा बुझाउँछ। अपार्टमेन्ट इक्विटी सहभागिता सम्झौताको आधारमा बेचे।
एलसीडी "Sirius": विकासकर्ता
यो बेलायत बजार मा एक परियोजना, "समूह को नेता हो।" कम्पनी 1992 देखि सञ्चालन गरिएको छ, तर आवासीय भवन एसके मात्र 2002nd मा महारत को निर्माण मा काम। कारण अचल सम्पत्ति व्यवस्थापन को बजार मा उच्च प्रतियोगिता तेस्रो-पक्ष ठेकेदार को संलग्नता बिना, एक जटिल मा सबै काम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे। क्षणमा, "नेता-समूह" यसको आफ्नै डिजाइन कार्यालय र स्रोत व्यवस्थापन, लागत अनुकूलन, निर्माण र बिक्री को लागि घरमा को तयारी को प्रक्रिया को लागि जिम्मेवार छन् जो व्यवसायीक एक कर्मचारी, साथै लेनदेन को कानुनी घटक र अनुबंध को कार्यान्वयन छ।
कम्पनी अहिले सबै काम बीमा मात्र अनुसार यस तालिका संग छ र कडाई गर्ने कमीशन मिति बताउँछ, 25 पूरा परियोजनाहरू छ। "नेता समूह" विकासकर्ता को एकमात्र जिम्मेवारी रूपमा बजार मा नै स्थापित छ।
परिसर को निर्माण कार्य 2015 को गिरावट मा सुरु भयो। 2016 को अन्तसम्ममा पूरा एलसीडी "Sirius" पहिलो चरणको निर्माण को लागि निर्धारित छ। "समूह को नेता" पहिले नै राख्नु भएको छ जसले आफ्नो पैसा प्रत्येक सम्भावित ग्राहक, सजिलै आफ्नो प्रश्नहरूको सबै उत्तर प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर, निर्माण को प्रगति मा एक पूर्ण र बिल्कुल पारदर्शी जानकारी यसको वेबसाइटमा प्रदान गर्दछ। दोस्रो चरण को 2017th मा सम्पन्न गरिनेछ। आवासीय जटिल "Sirius" टिप्पणी सह-लगानीकर्ताले प्रमाणको रूपमा, हाल तालिका मा अंतराल अवलोकन छैन। को जाडो लागि आशा धेरै उपभोक्ताहरु एक नयाँ घर प्रवेश गर्न छ त भवन निर्माण, योजना अनुसार रहेको छ।
निस्सन्देह, एलसीडी को सबै फाइदा र बेफाइदा सिक्न प्रयास सबै को पहिलो एक विशेष भवन मा एक घर को प्रत्येक सम्भावित मालिक, साथै वातावरण सम्बन्धी आधारभूत विशेषताहरु, पूर्वाधार सुविधा, परिसर निर्माण भइरहेको छ जसमा क्षेत्र को परिवहन घटक को सुरक्षा। मा - कि पहिले नै निर्णय गरेका छन् जो र एक घर किनेको ती मानिसहरूलाई एलसीडी "Sirius", टिप्पणी प्रदान गर्दछ।
स्वाभाविक, अहिले हामीले वास्तवमा कुरा सुरु यदि मास्को क्षेत्र निष्खोट मा पर्यावरण अवस्था, कुनै समझदार व्यक्ति यो विश्वास थियो कि। यसलाई थप एक वर्ष भन्दा धूम्रपान जसमा पुरानो क्षेत्रहरु मध्ये एक, र केही ठाउँमा मात्र किनभने र अझै पनि औद्योगिक उत्पादन को पाइप प्रमुख गर्न जारी यदि यो प्राथमिकताओं हुन सक्दैन। तर, सबै कि खराब छैन। यसको दक्षिणी भाग - पहिले, परिसर पारिस्थितिकी को क्षेत्र को मामला मा शुद्ध ठाउँमा निर्माण भइरहेको छ। दोस्रो, अर्को यो, त्यहाँ वातावरण सकारात्मक प्रभाव पार्न धेरै ठूलो पार्क हो। तेस्रो, विकासकर्ता जो पनि स्थिति सुधार गर्नुपर्छ ल्यान्डस्केपिङ्ग मा एक विशाल काम, योजना छ।
साथै, एलसीडी "Sirius" समीक्षामा छोड्न मानिसहरूलाई अनुसार, कुनै एक हावा को सुगन्ध भरिएको गरिने अपेक्षा Pitsunda Pines। तर सबै आशा धेरै औद्योगिक सुविधाहरु को नवीकरण पछि क्षेत्र बाट कार्यक्रम हटाइनेछ पूरा भनेर।
यहाँ पूर्ण अर्डर। लगभग सबै प्रमुख खुद्रा, मनोरञ्जन र सामाजिक पूर्वाधार पैदल दूरी हो। एक विशाल सुपरमार्केट, यो पर्याप्त ठूलो सपिङ्ग सेन्टर ठीक छ भने सेन्ट पीटर्सबर्ग मा पुरानो को एक, यहाँ हरेक चरण मा कि त, पाउन सकिन्छ - त्यो, तर पनि अचम्मको छैन, पहिले नै उल्लेख रूपमा, देखि, को मास्को क्षेत्र छ। रेस्टुरेन्ट, क्याफेहरू, औषधि पसल, क्लिनिक, विद्यालय, Kindergartens, माथि निजीमा - अतिरिक्त मा एलसीडी "Sirius" नजिकै समान वस्तुहरु। साथै, भवन को पहिलो तल्ला मा आफ्नो बासिन्दाहरू जीवनमा पूरै घोषणा वर्ग सान्त्वना अनुरूप गर्नेछ धेरै सेवा व्यापारिक अभिमुखीकरण घर हुनेछ।
छ, महानगरबारे मात्रा मा, कुनै दूरी - यो मेट्रो "स्टार" स्टेशन एउटा किलोमिटर भन्दा एक सानो अधिक। तपाईं आठ मिनेटमा पुग्न सक्छ वा बस वा मिनिबस, आफ्नो हराएको फाइदाको द्वारा ड्राइव, र स्टप को घरहरू नजिकै छ।
एलसीडी "Sirius" बाट सात किलोमिटर को घन्टी निकास छ, साथै, तपाईं मास्को र पुलकोभो राजमार्ग को सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य तिनीहरूले गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि, सुरक्षा ओसारपसार आदर, यो बस असम्भव नकारात्मक कुरा हो।
बिक्री स्टूडियो र 1-2-3 बेडरूम अपार्टमेन्ट लागि 442 उपलब्ध - पहिलो भवन 134 आवासीय परिसर, दोस्रो खरिद गर्न प्रस्तावित छ। र "treshki" मात्र दोस्रो भवन हुनेछ। योजना सन्दर्भमा, तिनीहरूले पूरै घोषणा वर्ग सान्त्वना अनुरूप। सबै आवास कोठा को कार्यात्मक, Ergonomic व्यवस्था हो, त्यहाँ पनि आवास विकल्प, युरोपेली ढाँचा (संयुक्त बैठक कोठा र भान्सा) छन्। "Treshki" मा, दुई बाथरूम सुसज्जित छन् "kopeck टुक्रा" मा स्टूडियो मा, यी सुविधाहरु विभाजित छन्, र "odnushki" - संयोजन। Hallways ठूलो हो, अपार्टमेन्ट को आकार को बिना तिनीहरूलाई प्रत्येक सुसज्जित एक चमकता बरामदा संग।
को भोजन लागि जाँदा, तिनीहरूले पनि धेरै विशाल छन्। सानो आकार कम से कम 11 वर्ग छ। एम, सबै भन्दा ठूलो - लगभग 23 वर्ग मीटर। एम छत उचाइ -।।2मिटर 80 सेमी फ्लैट खत्म बिना बेचे।
अपार्टमेन्ट को क्षेत्र, आफ्नो आकार आधारमा 27 89 वर्ग मीटर देखि दायरा। एम। यसलाई भिन्न यस सन्दर्भमा र लागत मा। यसैले, स्टूडियो "odnushka",2400 000-3 245 000 rubles खर्च हुनेछ -3700 000-4 700 000, "kopeck टुक्रा" -5600 000-6 900 000 "treshki" को लागि सात आठ लाखौं दिन हुनेछ।
एलसीडी "Sirius": समीक्षा धारकों
मानिसहरू जटिल बारेमा के भनिरहेका छन्? द्वारा र ठूलो छ, यो चरण मा पनि प्रारम्भिक कुनै पनि निष्कर्ष आकर्षित गर्न। धेरै मानिसहरू प्रतिक्रिया मात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त जो, तिनीहरूले सबै निर्माण थिए आईसी 'नेता समूह "को घरहरू पहिले नै बस्ने ती को राय रुचि रूपमा, आवास गुणस्तर ठीक हुनेछ भन्ने आशा भन्न। परिसर निर्माण अन्तर्गत हुँदा, जाँच गर्न यो चरण मा हुन सक्छ कि मात्र कुरा - काम तालिका को उत्सव हो। यस विषयमा सम्म सबै क्रममा छ। बिल्डर नियमित घटनाहरू धारण, त्यसैले तपाईं पक्कै पनि पहिले नै यो मौकाको फाइदा लिएका छन् जसले समीक्षा, ती भन्नेछन् जो सस्ता आवास, खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै आवास जहाँ तपाईं भूमिगत पार्किङ गर्न तल जान सक्नुहुन्छ लिफ्ट, सुसज्जित गरिनेछ भन्ने तथ्यलाई जस्तै। साथै, धेरै अपार्टमेन्ट को लेआउट र आफ्नो विविधता रूपमा प्रशंसा - त्यहाँ एक विकल्प छ। आवास को लागत, खैर, सबैलाई यो विशेष यसको सहज वर्ग को दृश्य, स्वीकार्य छ सोच्छ।
त्यसैले, द्वारा र ठूलो छ, यो चरण मा मात्र नकारात्मक वातावरण आदर जान्छ। तथापि, पहिले नै उल्लेख रूपमा, कुनै एक जटिल Pitsunda स्थित गरिने बताए। क्षेत्र महानगरबारे पारिस्थितिक अवस्था मात्र स्वीकार गर्न सक्छन् भनेर यो पत्रुसको हृदय मा स्थित छ। यो त, र घृणित छ। साथै, त्यहाँ स्थिति भविष्यमा थप स्थिर बन्न हुनेछ धारणा छ।
तपाईं मास्को आउन भने, जहाँ रहन?
एलसीडी "स्टकहोम" बिल्डर Setl शहर देखि: समीक्षा
एलसीडी "नयाँ स्विट्जरल्याण्ड": आवासीय जटिल, रूपरेखा र वर्णन को समीक्षा
मा रूसी उपलब्ध छ जो जापानी कम tonnage ट्रक, - "मित्सुबिशी Canter"
भान्सामा शामको पोशाक: ढाँचा, फोटो